CIA VS. တကြ် CPA - ဘယ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည်? [It'saClose Call]
တကြ် CPA vs စီအိုင်အေ: သငျသညျအဘို့ သာ. ကောင်း၏ဘယ်ဟာအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်?
23 သြဂုတ် တကြ် CPA vs စီအိုင်အေ: သငျသညျအဘို့ သာ. ကောင်း၏ဘယ်ဟာအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်?
Posted at 22:50h တွင် Alternate Articles အားဖြင့် Bryce Welker, တကြ် CPA 1 Comment
ဖြေကြားမယ့်လှည်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒါဟာင်: သင်တစ်ဦးဖြစ်လာသင့်တယ် သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းပြည်တွင်းစာရင်းစစ်ချုပ် (စီအိုင်အေ) သို့မဟုတ်လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (တကြ် CPA)? နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေနှင့်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးကြောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အထောက်အထားများလေးစားကြသည်, သို့သော်သင်ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြဘူး? တစ်ခုချင်းစီကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောအချိန်ကတိကဝတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တောင်းမည်အဘယ်အရာကိုဖြိုခြင်းဖြင့်စတင်ပါရဲ့ကြစို့, ကြိုးစားအားထုတ်မှု, နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ.
တကြ် CPA vs စီအိုင်အေ: လက်မှတ်လိုအပ်ချက်များ
တကြ် CPA vs စီအိုင်အေ: စာမေးပွဲ
တကြ် CPA vs စီအိုင်အေ: လစာ
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် Ethics ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များဖျော်ဖြေဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်. အဘယ်ကြောင့်? သူတို့အများပြည်သူစာရင်းကိုင်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံရန်နှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဖျော်ဖြေမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်သောကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောဘဏ္ဍာရေးကြေညာချက်ပြင်ဆင်နေအဖြစ်, အခွန်ပြင်ဆင်မှု, နှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအစုတခုကုဒ်နှင့်အညီစောင့်ရှောက်ခြင်း-အားလုံးမှတ်တမ်းတင်. CPAs တရားဝင် IRS ကိုမှဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့တစ်ခုတည်းသောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏. တကြ် CPA ဖြစ်လာရန်သင် AICPA ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်သောနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောတကြ် CPA စာမေးပွဲရမယ်. ဒါဟာပါဝင်ပါသည်4စိတျအပိုငျး: စာရင်းကိုင်နှင့်စာရင်းစစ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် Concepts, ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းကိုင်အစီရင်ခံ, and Regulation.
တကြ် CPA ဖြစ်လာရန်သင် AICPA ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်သောနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောတကြ် CPA စာမေးပွဲရမယ်
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းပြည်တွင်းစာရင်းစစ်ချုပ်ကုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေး၏ပြည်တွင်းရေးစာရင်းစစ်များနှင့်ပြည်တွင်းရေးနဲ့ controller ဖျော်ဖြေအပေါ်နီးပါးသီးသန့်အာရုံစူးစိုက်. CIAs လည်းသတင်းအချက်အလက်စနစ်များစာရင်းစစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်, လိုက်နာမှုနှင့်အခြားသော့ချက်ပြည်တွင်းရေး protocols များ. ဤသည်အမြဲရှိသည်နှင့်မြင့်မားသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများလိုက်နာရန်သင့်အားလိုအပ်သည်အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်. ရုံတကြ် CPA နဲ့တူ, တစ်ဦးစီအိုင်အေဖြစ်လာဖို့စာမေးပွဲရမယ်. စီအိုင်အေစာမေးပွဲတွင်ပြည်တွင်းစာရင်းစစ်ချုပ်၏ Institute ကအုပ်ချုပ်နေပါတယ် (IIA) နှင့်ပါဝင်ပါသည်3စိတျအပိုငျး: ပြည်တွင်းစာရင်းစစ်ဘို့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသိပညာ, ပြည်တွင်းစာရင်းစစ်၏အလေ့အကျင့်, ပြည်တွင်းစာရင်းစစ်နှင့် Essentials. သင်ကအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် အကောင်းဆုံးစီအိုင်အေ prep သင်တန်းများ ဒီမှာ.
တစ်အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်ကနေလေးနှစ် post-secondary ဒီဂရီရရှိခဲ့ပြီးပါပြီ. (ဤလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအစားထိုးနိုင်ပါတယ်; Post-အလယ်တန်းကျောင်းများ၏နှစ်နှစ်နှင့်အတူ coupled အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏တစ်ခုခုကိုငါးနှစ်အတွင်း, သို့မဟုတ်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုစာရင်းစစ်အလုပ်၏ခုနစ်နှစ်။)
တစ်ဦးစီအိုင်အေကလက်မှတ်ရေးထိုးတစ်ဦးက Character ကိုးကားစရာ Form ကို Submit, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA, သို့မဟုတ်သင့်အလုပ်ကြီးကြပ်သူ
ကျင့်ဝတ်၏ IIA ရဲ့ Code ကိုလိုက်နာရန်သဘောတူ
တစ်ဦးစီအိုင်အေဖြစ်လာရန်လိုအပ်သောအချိန်များစွာကွဲပြားခြားနားသည်, ပညာရေး / လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံများအတွက်အများကြီး options များပေါ်တွင် အခြေခံ.. သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်4သင့်ရဲ့ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ဝင်ငွေမှကောလိပ်ကျောင်းများတွင်နှစ်ပေါင်း. ထိုအခါသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်2အတည်ပြုအလုပ်အတွေ့အကြုံ၏နှစ်ပေါင်း, အရာမှစုစုပေါင်းတတ်၏6နှစ်ပေါင်း. IIA ခွင့်ပြု4စာမေးပွဲဖြေဆိုသွားနှစ်ပေါင်း (အရာလည်းအလွန်နိမ့်ဖြတ်သန်းနှုန်းမှာရှိပါတယ်), ဒါကြောင့်သင်ကယူနိုင်ကြောင်း 10 certified ရရှိထားပြီးဖြစ်လာဖို့နှစ်ပေါင်း. တကြ် CPA ဖြစ်လာစေရန်, သငျသညျကိုအောက်ပါလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရပါမည်:
အဆိုပါ U.S များ၏ပညာရေးနှင့်အတွေ့အကြုံကလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း. သငျသညျလိုင်စင်ရခံရဖို့သွားကြသည်သောပြည်နယ်. ဤရွေ့ကားပြည်နယ်မှပြည်နယ်မှမတူကြ, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုစာရင်းကိုင်အတွက်အနည်းဆုံးလေးနှစ်ဒီဂရီရှိသည်ဖို့သင်မေး, လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ဆက်စပ်လယ်ပြင်နှင့်အထွေထွေစာရင်းကိုင်အလုပ်၏နှစ်နှစ်
လေးအပိုင်းတကြ် CPA စာမေးပွဲမှဖြတ်သွား
ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်နီးကပ်စွာသင့်ရဲ့တကြ် CPA ခရီးစိုက်ကြည့်ရှေ့၌သင်တို့ပြည်နယ်၏လိုအပ်ချက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သငျသညျအားပေး. CIAs တွေနဲ့မတူဘဲ, အဘယ်သူသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအသိအမှတ်ပြုကြသည်, CPAs သူတို့လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်တစ်ဦးချင်းစီပြည်နယ်များအတွက်လိုင်စင်ရယူရမယ်. သင်တို့ပတ်လည်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်5နှစ်ပေါင်းသင့်ရဲ့ဘွဲ့နှင့် / သို့မဟုတ်ဖြည့်ဆည်းဖို့မာစတာဘွဲ့ရတဲ့ 150 တကြ် CPA ဖြစ်လာမှအကြွေးနာရီလိုအပ်ချက်. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလိုအပ်တယ်ဆိုလျှင်, ထို့နောက်အခြား add2နှစ်ပေါင်း. အဆိုပါ AICPA ခွင့်ပြု 18 ထို CPA စာမေးပွဲမှလပေါင်းများစွာ. အားလုံးမှတက်ကထပ်ပြောသည်ကြောင်း 8 ½နှစ်ပေါင်း.
စီအိုင်အေစာမေးပွဲဖြစ်ပါသည် 100% Compute-based နဲ့သုံးသီးခြားအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်:
အပိုင်း 1: ပြည်တွင်းရေးစာရင်းစစ်အခြေခံ
အပိုင်း 2: ပြည်တွင်းရေးစာရင်းစစ်အလေ့အကျင့်
အပိုင်း 3: ပြည်တွင်းရေးစာရင်းစစ်အသိပညာ Element တွေကို
သင်ကမဆိုတဦးတည်းမှာတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးမည်သည့်အချိန်တွင်မစီအိုင်အေစာမေးပွဲတွင်ယူနိုင်ပါသည် 500+ Pearson Vue ကမ္ဘာတဝှမ်းစင်တာ. စာမေးပွဲအတွက်ပူဇော်သော 16 ဘာသာစကားများ, Arabic အဘိဓါန်အပါအဝင်, တရုတ် (အစဉ်အလာ), အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, ဟီဘရူး, အင်ဒိုနီးရှား, အီတလီ, ဂျပန်, ကိုရီးယား, အရောင်တင်, ပေါ်တူဂီ, ရုရှား, စပိန်, တူရကီ, နှင့်ထိုင်း. သင်တစ်ဦး IIA အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, အဆိုပါဆနျးစစျ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည် $990. non-အဖွဲ့ဝင်များမှာအပြည့်အဝစျေးနှုန်းပေးချေရန်ရှိသည် $1,150, ဒါကြောင့်တစ်ဦး IIA အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရန်သင်၏အချိန်ရကျိုးနပ်သည်အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါတကြ် CPA စာမေးပွဲလေးအပိုင်းကိုတက်ဖန်ဆင်းထားသည်:
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် Concepts (BEC)
စီအိုင်အေစာမေးပွဲလိုပဲ, ထို CPA စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည် 100% ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံပြီး. သို့သျောလညျး, ကသာတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးလေးနှစ်ယောက်တစ်လပြတင်းပေါက်စဉ်အတွင်း Prometric စမ်းသပ်ခြင်းစင်တာများမှတဆင့်အုပ်ချုပ်နေသည်. အဆိုပါစာမေးပွဲကိုမတ်လကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မဟုတ်ပါ, ဇွန်လ, စက်တင်ဘာလသို့မဟုတ်ဒီဇင်ဘာလ. ထို CPA စာမေးပွဲ၏ကုန်ကျစရိတ်ပြည်နယ် / တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကကွဲပြားခြားနားသည်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ထံမှနေကြပါတယ် $600 သို့ $800 လေးယောက်စလုံးကဏ္ဍများများအတွက်.
ယေဘုယျအားဖြင့်, CPAs CIAs ထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးဝင်ငွေ, သို့သော်ဤလူအပေါင်းတို့သည်စီအိုင်အေရဲ့အလုပ်ခေါင်းစဉ်အပေါ်မူတည်. အခွားသောအချက်များတစ်ဦးစီအိုင်အေသို့မဟုတ် CPAs လစာဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောနေရာအဖြစ်, ခေါင်းစဥ်, နှင့်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းသင့်ရဲ့လစာဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်. တကြ် CPA များအတွက်ပျမ်းမျှလစာဖြစ်ပါသည် $62,123 နှင့် $59,677 စီအိုင်အေအဘို့. မကြာသေးမီကရှိတင်းကျပ်တာဝန်ခံတစ်ဦးမြင့်ဝယ်လိုအားခဲ့ခြင်းနှင့်စိစစ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။, CIAs နှင့် CPAs နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်းအကောင်းမြင်အောင်.
ဒါပေါ့, ဒီအားလုံးသင်ပြုချင်သောအရာကိုအပေါ်မူတည်. စာမေးပွဲဖြေဆိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကစီအိုင်အေလက်မှတ်ထို CPA ထက်ရရှိရန်လွယ်ကူသည် 1 စာရင်းကိုင်၏အဓိကရှုထောင့်, ထို CPA စာမေးပွဲတွင်အပေါ်အခြေခံသည်သော်လည်း 4. သငျသညျအသေးစိတျအလုပျမွေ့လျော်ခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့လျှင်, စီအိုင်အေလက်မှတ်သင်တို့အဘို့ကောင်းကောင်းထွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာ. သို့သော်ငြားလည်း, တကြ် CPA လည်းစာရင်းစစ်အလုပ်ကိုပေမယ့်အခွန်၏ဒေသများတွင်ပိုမိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရှိပြီးအစီရင်ခံနိုင်ပါတယ်, တစ်ဦးထက်ပိုစွယ်စုံအထောက်အထားများကို. သငျသညျစာရင်းစစ်လိုပါက, အခွန်, အစီရင်ခံခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်း, ထို့နောက်တကြ် CPA လမ်းကြောင်းသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်. သင်ဘဏ္ဍာရေးလောကရှိ ပို. ပင် standout လိုပါက, သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးအဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်! သင့်ရဲ့တကြ် CPA ခရီးကိုစတင်, သင်စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့လေ့လာဖို့အသုံးပွုသငျ့သောအရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းသုတေသနပြုခြင်းဖြင့်စတင်ပါသင့်တယ်. ဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြီးတွေခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်! TOP စီအိုင်အေပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်
THE BEST တကြ် CPA ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးသင်တန်း FIND
Posted at 25 မတ်လ, 2018 16:31 ညနေ Reply